Azonao atao izao ny mampiasa ny VPN maimaim-poana atolotry ny tranokalan'ny Opera anay amin'ny fanavaozana manaraka | Androidsis
Ny mpamatsy Internet rehetra, fantatra amin'ny anarana hoe ISP, amin'ny ankapobeny mitahiry firaketana ny asanay amin'ny Internet izy ireo, ka raha te hitahiry ny tsy hitonona anarana amin'ny Internet isika dia voatery terena hampiasa VPN. Opera dia nanolotra serivisy VPN misy karama aminay amin'ny alàlan'ny fampiharana izay nesoriny tao amin'ny Play Store herintaona lasa izay.
Ity serivisy ity io dia tsy notantanan'ny Opera mivantanaFa kosa, tamin'ny alàlan'ny antoko fahatelo. Averina indray, miverina amin'ny entana ny orinasa ary ny kinova Opera manaraka dia hampiditra VPN ao anaty tranokala. Raha te-hitsapa ny fiasan'ny kinova Opera manaraka sy ny VPN tafiditra ao aminy ianao dia azonao atao izao.
VPN mamela antsika tariho ny angon-draketanay rehetra amin'ny alàlan'ny fifandraisana azo antoka alohan'ny handehanana amin'ny Internet. Ity karazana fifandraisana ity dia tsy mamela ny ISP hahalala izay toerana halehantsika, inona no ataontsika, izay pejin-tranonkala tsidihintsika ... Ny lafiny ratsy dia ny fahafantaran'ny VPN ny fivezivezena amin'ny Internet antsika rehetra, satria mandalo azy ireo izany, noho izany dia zava-dehibe ny afaka matoky serivisy fantatray fa tsy mitahiry firaketana ary tsy hivarotra ny angon-drakitra avy eo.
Ity no antony lehibe ahitantsika VPN maimaim-poana, satria izy ireo dia mitahiry ny asantsika sy ny tsena miaraka amin'izy ireo. Araka ny filazan'ny Opera, ny endri-javatra VPN vaovao dia tsy mitahiry hazo misy ny hetsika ataontsika. Raha te hanandrana ny fiasa VPN vaovao tafiditra ao amin'ny kinova Opera manaraka ianao dia efa azonao atao amin'ny alàlan'ny rohy avelako eo amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Voalohany indrindra, tsy maintsy jerena fa beta izy, ka mety tsy ny fandidiana azy no mety indrindra. Ahoana ny fiasan'ny VPN tsy misy afa-tsy amin'ny takelaka manokana, takelaka izay matetika ampiasaintsika hanatanterahana ny fikarohana izay tsy tiantsika ny hamela soritra na amin'ny telefaona na amin'ny ISP.
Opera versi beta
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Azonao atao izao ny mampiasa ny VPN maimaim-poana izay hatolotry ny mpanamory Opera antsika amin'ny fanavaozana manaraka azy